Trekking in Mindat
? ကဗျာဆန်တဲ့ ချင်းတို့မြေ တောင်ဇလပ်ပန်း ဖူးပွင့်ဝေ တိမ်တွေပေါ်က ထင်းရှူးတောအုပ်များ ?
? ရဲသွေးနီတောင်ဇလပ်ပန်း ခိုင်မာတဲ့ကတိသစ္စာ ကဗျာဆန်တဲ့အောက်ချင်းငှက်မောင်နှံ ?
ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ် ကိုးခု
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Downtown မှာ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ် စုစုပေါင်း ကိုးခုရှိတယ်။ ကိုးခုလုံးကို ချမ်းသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့အရ လက်ရှိ ရေပန်းအစားဆုံးက ဝဇီရာရုပ်ရှင်ဥယျာဉ်လမ်း ပါပဲ။ နောက်ထပ်လှတဲ့ နေရာနှစ်ခုက ၄၁လမ်းနဲ့ ၄၂လမ်းကြားရယ်၊ ၂၉လမ်းနဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်းကြား နေရာတွေပါ။
ရနံ့မပျယ်သေးသော မြတ်နိုးဖွယ် အညာရွာလေး မက္ခရာ
မန္တလေးမြို့နှင့် မနီးမဝေးတွင် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ မပျောက်ပျယ်သေးသော မြတ်နိုးဖွယ် မြန်မာရွာလေးတစ်ရွာ ရှိနေသေးသည်ဟု သိရသည်နှင့် တပြိုင်နက် တက်တက်ကြွကြွ သွားရောက်လေ့လာဖြစ်သည်။
အပျော်ကြီး ပျော်ရပါသော သီပေါ
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ သီပေါမြို့က ပြောရမယ်ဆိုရင် ခရီးထွက်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒေသပေါ့။ သဘာဝအလှတွေထဲ စီးမျောမလား၊ သမိုင်းဝင်ခေတ်ဟောင်းဇာတ်လမ်းတွေထဲ လွမ်းမောမလား၊ ကုလိုလ်အရေး ဘုရားဖူးမလား… အရာရာ စုံစိလို့နေသည်။ ထို့ထက်သာ၍ ပြည့်စုံသွားစေသည်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားရသောကြောင့်ပင်။
“နှစ်ခါမခေါ်ရသည့် အမရပူရ” ဟု ခေါင်းစီးတပ်ထားရသည့် အကြောင်းရင်းခံ ကျွန်မတွင် ရှိသည်။ အမရပူရမြို့သို့ အခါအားလျော်စွာ ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်သော်လည်း အဝေးရောက်ဆွေမျိုးဖြစ်သူမှ ရွှေမြို့တော်အနှံ့ ဘုရားဖူးခရီး လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုလာသောအခါ စာမေးပွဲတစ်ခုနှင့် နီးကပ်နေပါသော်လည်း နှစ်ကြိမ်ခေါ်စရာမလို… လိုက်ပို့ပေးမည်ဟု ကတိကဝတ်ပေးထားခဲ့သည် ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် အမရပူရ - မင်းကွန်း - ပင်းယ - မက္ခရာ ခရီးစဉ်ကို ကတိုက်ကရိုက် စီစဉ်ရလေတော့သည်။